IMasakhane, iphrojekthi yomthombo ovulekile eyenza ukuhumusha komshini ngezilimi ezingaphezu kuka-2000 zase-Afrika | Kusuka kuLinux
IMasakhane, iphrojekthi yomthombo ovulekile eyenza ukuhumusha komshini ngezilimi ezingaphezu kuka-2000 zase-Afrika
Okuhle | | Okunye
Lapho sivame ukuzwa ngamaphrojekthi womthombo ovulekile ezimweni eziningi izinhlelo zifika engqondweni noma izinsiza ngenhloso yomsebenzi wansuku zonke. Noma kungenjalo, kusukela umthombo ovulekile ihlanganisa izindawo eziningi.
Obunye babo ubuhlakani bokufakelwa obukhula njengamanje ngendlela eyisimanga, yize eminyakeni ethile edlule kwakukholakala ukuthi kungaba yinto ezokhula kahle eminyakeni eminingi kamuva.
I-Artificial intelligence (AI) okwamanje isetshenziselwa amacala ahlukahlukene, okuthandwa kakhulu ukuthola izinto, abantu, amaphethini phakathi kwezinye izinto. Iphinde isetshenziswe ngaphakathi kwabahumushi, iningi lazo elinamalungelo obunikazi yizinkampani.
Kepha kulokhu sizokhuluma ngephrojekthi yomthombo ovulekile okuvuselele isasasa labaningi kusukela lapho ithuthukiswa ukuhlangabezana nesidingo esikhulu ensimini yase-Afrika, okuwukuxhumana njengoba okwamanje kulinganiselwa ukuthi kunezilimi ezilinganiselwa ku-2000 e-Afrika.
Masakhane iphrojekthi okumele ifezeke ukuze kuzuze bonke abantu
Iphrojekthi esizokhuluma ngayo yile "Masakhane" okuwumsebenzi owasungulwa ngabaphenyi baseNingizimu Afrika be-IA uJade Abbott noLaura Martinus no iphrojekthi isebenzisana nabaphenyi be-AI nososayensi bedatha abavela kulo lonke elase-Afrika.
Ngesikhathi behlangana engqungqutheleni ephathelene nokufundwa kwemishini nokucutshungulwa kolimi lwemvelo (NLP) kulo nyaka, baxoxisana ngephrojekthi yokuhumusha izilimi zase-Afrika zibe amamodeli okufunda ngomshini base beqala iMasakhane. Igama lephrojekthi "Masakhane" igama elisho ukuthi "ukwenza ndawonye" ngesiZulu.
Izilimi ezivumela ukuhunyushwa komshini eMasakhane azibandakanyi izilimi zomdabu kuphela Abantu base-Afrika, kodwa futhi nolimi lwaseNigeria IsiPidgin ngesiNgisi nangesi-Arabhu esikhulunywa eNyakatho nase-Afrika Ephakathi. Ngokungafani nezilimi zaseYurophu, lezi zilimi azinawo amaphuzu akhomba athile noma amasethi wedatha amakhulu.
Ngaphezu kwalokho ukubaluleka kokunikeza amathuba amaningi kuma-Afrika, izinzuzo zabathuthukisi ababamba iqhaza eMasakhane zibhalwe njenge "Impumelelo yamaphrojekthi we-AI yase-Afrika ngumcwaningi we-AI wase-Afrika." Kungaholela emikhawulweni ekhululekile.
Empeleni ku UMasakhane unabathuthukisi abangaba ngu-60 e-Afrika (INingizimu Afrika, iKenya neNigeria) lapho umhlanganyeli ngamunye eqoqa idatha ngolimi lwabo lwendabuko bese eqeqesha imodeli.
EKenya, isiNgisi sivame ukusetshenziswa ezikoleni nakwezinye izindawo zomphakathi, kepha empilweni yansuku zonke kusetshenziswa izilimi ezahlukahlukene esizweni ngasinye, ngakho-ke uSiminyu wezwa ukuthi kukhona igebe lokuxhumana. Ingabe. Ngakho-ke, unjiniyela we-AI uSiminyu uthathe isinqumo sokujoyina uMasakhane.
USiminyu ukholelwa ukuthi ukuhunyushwa kwezilimi zase-Afrika kusetshenziswa imishini yokufunda kuzoholela ekukhuleni ekusetshenzisweni kwe-AI e-Afrika, okusiza abantu abase-Afrika ukuthi basebenzise i-AI ezimpilweni zabo. USiminyu uthi amaphrojekthi kulo lonke izwekazi, njengoMasakhane, zibalulekile ekuxhumaniseni onjiniyela base-Afrika kanye nemiphakathi yocwaningo ngokusebenzisana kwesikhathi eside nokusimama.
“Ukwehluka kolimi kuyisithiyo, futhi ukususa umgoqo wolimi kuzovumela abantu abaningi base-Afrika ukuthi babambe iqhaza emnothweni wedijithali futhi, ekugcineni, emnothweni we-AI. "Ngibona sengathi kungumsebenzi walabo ababambe iqhaza eMasakhane ukuthola abantu abangabandakanyeki emphakathini we-AI," kusho uSiminyu.
Abasizi ngu Masakhane bathi umphakathi wonjiniyela e-Afrika ukhula ngokushesha nokuthi izinzuzo zokuhumusha ngomshini ngezilimi zase-Afrika zibalulekile.
Singayixazulula inkinga. Sinabachwepheshe, sinolwazi nobuhlakani… ngicabanga ukuthi bazoba yisisekelo sokunikela emhlabeni. Kusho umakhi wase-Afrika.
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi kabanzi ngephrojekthi, ungabheka imininingwane kuwebhusayithi yayo esemthethweni. Isixhumanisi yilokhu.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » IMasakhane, iphrojekthi yomthombo ovulekile eyenza ukuhumusha komshini ngezilimi ezingaphezu kuka-2000 zase-Afrika
Lawa amacebo we-Ubuntu 20.04 wamaphakeji angama-32-bit
I-Bubblewrap, ithuluzi lokwakha izinhlelo zokusebenza ezindaweni ezikude